Fanokafana ny 1ère Assemblée générale ny CFM ho amin’ity taona 2021 – CFM – Madagasikara
19 Fév ANTSO HO AMIN’NY FITONIANA
09 Fév ANTSO HO AMIN’NY FANAJANA NY SOATOAVINA MALAGASY
24 Juil Appel a un Elan de Solidarité 24/07/2020
24 Juil Antso ho amin’ny Firaisankina sy ny Fihavanana
19 Mai Fanambarana teto amin’ny CFM anio 19-05-2020
Fanokafana ny 1ère Assemblée générale ny CFM ho amin’ity taona 2021
Fanokafana ny 1ère Assemblée générale ny CFM ho amin’ity taona 2021 ity.
Assemblée générale izay didian’ny lalana 2016-0137 hatao isan-telo volana.
Nifantoka amin’ny ampahany betsaka amin’ny toe-draharaham-pirenena ara-politika anketriny ny kabarin’ny filohan’ny CFM, MAKA Alphonse, raha nanokatra ny fotoana izy androany (01.03.2021), tao amin’ny lapan’ny Fampihavanana Ampefiloha.
« Manoloana ny toe-draharaham-pirenena, izay somary miakatrakatra ny mari-pana ara-politika ary mihamazo vahana ny disadisa ara-politika eo amin’ny mpitondra sy ny mpanohitra, dia tsy hain’ny CFM ny tsy hanao antso avo ho amin’ny fitoniana. Mihamafy koa ny fifampihantsiana eo amin’ny andaniny sy ny ankilany. Izany dia hita taratra eo amin’ireo fandaharana amin’ny haino amanjery sy ireo tambazotran-tserasera misy eto amintsika. Koa manao antso avo ihany koa amintsika mpanao gazety, izay manana andraikitra amin’ny isian’ny fitoniana.
Maro ny fikorontanana etsy sy eroa, raha tsy hiteny afa tsy ny toe-draharaha sy ny fitokonana eny amin’ny anjery manontolo, Toamasina, Toliara, Fianarantsoa, Ens, Votonvorona, teo ko ny an’ny Paramed… midika ireo rehetra ireo fa ohatran’ny mananontanona ny krizy ara-tsosialy sy ara-politika. Na izany aza dia tsy miraviravy tanana ny CFM fa miezaka hatrany mitandro ny fitoniana, sy mitady ny vahaolana manoloana amin’ny toe-draharaha misy ankehitriny. Anisan’izany ny fivoriana misesisesy nataon’ny birao maharitra sy ny mpikambana sasantsasany, ka izany dia nahafahana nanao ny antso avo mba hisian’ny fitoniana eto amin’ny firenena.
Eo koa ny fanantonanana sy fihenoana ny mpomba ny fitondrana sy ny mpanohitra, ireo ray amandreny isan-tokony, ireo ray amandreny ara-panahy, ireo ray amandreny ara-drazana, ny fiarahamonim-pirenena, ny mpandraharaha… iray ny tanjona dia ny hisorohana ny fifandonana mba tsy hiteraka ra latsaka indray ho an’ny mpiray tanindrazana, ny hialana amin’ny fiverenan’ny krizy eto amin’ny firenena.
Nohamafisin’ny CFM fa zava-dehibe ny fifampiresahana sy ny fisian’ny fifanantonana amin’ny ankolafin-kery rehetra na avy aiza na avy aiza. Tsy nataonay ambanin-javatra ihany koa ny fanantonana ireo mpiara-miombon’antoka amintsika. Zany fifanantonana izany dia tsy mifarana fa mbola mitohy hatramin’izao itenenana izao ».
Nampatsiahivin’ny filoha MAKA Alphonse, ny hafatry ny filoham-pirenana ho an’ny CFM dia ny hanao anton-draharaha ny fanovana ny toe-tsaina mifotra amin’ny famerenana ny fandalan’ny malagasy ny soatoavina, ka anisan’izany ny fihavanana, mba ho antoky ny fampandrosoana.
Teo anoloan’ny mpanao gazety nanatrika ny fotoana dia nanamafy ny filohan’ny CFM fa « zava-dehibe ny fifampiresahana, tsy mila ny avy any ivelany isika fa afaka mifanantona. Ary ny tena mahavelombolo amin’ny ezaka fifampanantonana ataon’ny CFM dia samy manaiky na ny andaniny eo amin’ny fitondrana na ny ankilany amin’ny mpanohitra fa zava-dehibe tokoa ny fifampiresahana ary tsy sasatra zahay ny miantso ny fitoniana mba hisian’ny fandrosoana, ka izany dia avy amin’ny fifampihainoana ». Noraisin’ity farany ohatra ny zava-misy teo amin’ny mpianatry ny anjery manontolo tany Toliara, « efa miravina amin’izao ny olana ary efa milamina ny any an-toerana satria efa nisy ny fifampiresahana teo amin’ny mpitondra (ny mpitantana ny oniversite) sy ny mpianatra. Koa manainga antsika rehetra mba hanamafy ny fifampiresahana ka hanao toy izany ».
Teo am-pamaranana ny kabariny, dia nampahatsiahy ny vinasa 5 (5 grands chantiers) ny CFM ny filohany, efa natomboka tamin’ny taon-dasa izy ireo nefa noho ny zava-misy teto amin’ny firenena dia tsy tontosa ka hotohizana amin’ity taona ity.
Espace de dialogue na sehatra ifampiresahana, apetraka isam-paritra ka nisy ny efa nahavita, ezahina ny hametraka azy manontolo amin’ity taona 2021 ity.
Fifindra-monina anatiny, miteraka olana ara-piarahamonina
Fampihavanana ara-tantara, natomboka tany Ifandana, Ambalavao Tsienimparihy
Famotsoran-keloka sy ny fanarenana ireo niharam-boina noho ny krizy
Fanakilasiana ny fihavanana ho vavoka tsy hita maso iraisam-pirenena (inscription du Fihavanana sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité).
← Visite de courtoisie, Issa Sanogo, coordonnateur résidant des Nations-Unies à Madagascar chez le Président du CFM.
Ordre du Jour de l’AG de se premier trimestre 2021 →
Aujourdhui : 47
Ce mois : 609
Total Visite : 43349
Votre Adresse IP public: 35.173.234.169